नेपाल मै बसेर सौन्दर्य व्यवसाय बाट महिलाले आर्थिक बिकास गर्न सक्छन: सौन्दर्यकर्मि संगीता पाण्डे – Pokhara Voice
नेपाल मै बसेर सौन्दर्य व्यवसाय बाट महिलाले आर्थिक बिकास गर्न सक्छन: सौन्दर्यकर्मि संगीता पाण्डे
यो व्यवसाय लाई निरन्तरता दिने हो भने नेपाल मै बसेर महिला दिदीबहिनीले आर्थिक प्रगति गर्न सक्छन
By देबेन्द्र एस के	 On २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ०९:५५
देबेन्द्र एस के २४ चैत्र, बिगत लामो समय देखि सौन्दर्य व्यवसाय गर्दै अहिलले कुशल प्रशिक्षक हुदै रास्ट्रीय सौन्दर्यकर्मि युनियन नेपाल गण्डकी प्रदेस इन्चार्ज को जिम्मेवारी समाह्ल्दै ,अहिले बिभिन्न सस्थाले आयोजना गरेको सौन्दर्य सम्बधि तालिम प्रदान गर्दै सौन्दर्य व्यवसाय बिकास मा बिशेष योगदान गर्दै आउनु भएकी सौन्दर्य प्रशिक्षक संगीता पाण्डे संग्ग को कुराकानी।
सौन्दर्यकर्मी भनेको के बुझने हामि नेपालिहरु लाई ले अलि प्रस्ट पारिदिनुस ?
सौन्दर्यकर्मी भनेको हाम्रो रास्ट्रिय सस्था हो जसमा हामि सुन्दर मान्छे लाई थप सुन्दर बनाउने काम गर्ने गर्दछौ । सौन्दर्य व्यवसाय दिदीबहिनी को सामुहिक सस्था हो।
तपाइले कहिले देखि यो पेसा व्यवसाय लाई अगाल्नु भो ?
२०६४ बाट सौन्दर्य व्यवसाय लाई अंगालेको हुम लगभग १२/१३ बर्ष जति भयो।
अहिले महिला दिदीबहिनीहरु कतिको सौन्दर्य व्यवसाय मा सक्रिय छन् ?
पछिल्लो समय सौन्दर्य व्यवसाय मा महिला दिदीबहिनी निकै लोभलाग्दो देखिएको छ, किन भने सानो ठाउमा पनि र सानो पुंजीले पनि गर्न सकिने व्यवसाय भएकाले होला पछिल्लो समय आकर्षण बढेको छ । महिला दिदि बहिनि मात्र नभई अहिले हामि देख्न सक्छौ पुरुष दाजु भाइ पनि यो व्यवसाय लाई अंगाल्दै छन्। खुशी लाग्छ।
अहिले र पहिले मा यो व्यवसाय मा के के फरक पाउनु भाछ ?
पहिलो कुरा सामाजिक दृस्टी पनि फरक भएको छ। अहिले सौन्दर्य व्यवसाय लाई सम्मानजनक ले हेर्ने गरिन्छ। अर्को कामको कुरा गर्दा प्रवाधि ले अहिले अलि सहज बनेको छ।
अहिले नेपाल सरकार ले पनि दिदीबहिनी हरु लाई तालिम आयोजना गर्छ नी है र ?
हो अहिले हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि महिला को शिप बिकासका लागि सौन्दर्य सम्बधि तालिम आयोजना गर्ने गरेको छ यो महिला दिदीबहिनीका लागि निकै उपयोगी छ।
सौन्दर्य व्यवसाय बाट आर्थिक बिकास गर्न सकिन्छ ?
यो पेसा व्यवसाय लाई निरन्तरता दिने हो भने नेपाल मै बसेर महिला दिदीबहिनीले आर्थिक प्रगति गर्न सक्छन र सरकार को आर्थिक बिकासमा ठुलो राहत हुनसक्छ।
तपाई सौन्दर्य प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ यदि सौन्दर्यकर्मी बन्ने चाहाना भए कसरि बन्न सकिन्छ ?
अहिले निकै सहज छ यो पेसामा आउनलाई किनकि हाम्रै वरिपरि थुप्रै व्युटी पार्लर छन् त्यहा बाट पनि सिक्न सकिन्छ अर्को हाम्रो स्थानीय सरकारले सिपमुलक तालिम हरेक वर्ष ल्याउने गर्दछ त्यहि समयमा सहभागी पनि हुन् सकिन्छ।
कति समय लाग्छ कुशल सौन्दर्यकर्मी हुन् लाई ?
त्यो व्यक्त्ति मा भर पर्ने कुरा हो यसमा पनि लेवल १ देखि शुरुवात हुन्छ कम्तिमा १ वर्ष जति।
कुशल सौन्दर्यकर्मिमा हुनुपर्ने असल गुण के के हुन् जस्तो लाग्छ ?
पहिला त् सहनशीलता अनि आएका ग्राहकलाई खुशी पार्न सक्नु पर्छ साथै काम मा परिपक्ता हुनुपर्छ।
घरमै बसेर कसरि आफ्नो छाला को कसरि हेरचाह गर्नसकिन्छ ?
पार्लर मै आउनु पर्छ भन्ने छैन अहिले त् हातमा जानकारी छ रेडीयो, टिभी र युटुब बाट जानकारी लिनसकिन्छ। छाला अनुशार को क्रिम प्रयोग गर्नु पर्छ। दिदीबहिनी हरु अहिले पनि एउटा क्रिम लाई बर्ष दिन पुगाउनु हुन्छ कुनै ब्पानी क्रिम ३ महिना भित्र प्रयोग गरिसक्नु पर्छ।
खानपिन मा कति ध्यान दिनु पर्छ ?
हाम्रो बानि के छः भने बाहिर को खाना बढि खाने प्रचलन छ सके सम्म आफनै घरको खाना र खादा राम्रो आर्गानिक खाना खादा त्यसले स्वास्थ पनि राम्रो राख्छ र छाला लाई पनि राम्रो गर्छ अनि पानो प्रसस्त पिउनु पर्छ जसले छाला लाई फुस्रो हुन बाट बचाउछ।
मेरोबारे यति धेरै कुराहरू सोधपुछ गर्दिनुभएकोमा पोखरा भ्वाईस प्रति आभारी छु, सधैँभरि यस्तै साथ अनि सपोर्ट पाउँछु भन्नेमा आशावादी छु ।